बेलायत पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले भने – 'सरकारकाे नेतृत्व फेर्ने निर्णय पार्टीले गर्छ'- समाचार - कान्तिपुर समाचार
जेष्ठ २८, २०७६ नबिन पोखरेल
लन्डन — बेलायतको तीन दिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सोमबार साँझ लन्डन उत्रिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को शत वार्षिकी समारोहलाई सम्वोधन गरेर बेलायत आइपुगेका हुन् ।
लन्डन हिथ्रो विमानस्थल उत्रिदाँ ओली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई बेलायती आर्मड फोर्सेस राज्यमन्त्री मार्क ल्यान्कास्टर, राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी लगायतले स्वागत गरेका थिए ।
लगत्तै ओली नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसहित अक्सफोर्ड युनियनको कार्यक्रममा सहभागी भए । लन्डनबाट करिब ५६ माइल टाढा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन उनीहरु हेलिकप्टरबाट पुगेका थिए ।
कार्यक्रममा निर्धारित समयभन्दा एक घण्टा ढिलो पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्नोत्तर सत्रमा सत्ता नछाड्ने संकेत गरेका छन् । अर्का पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अढाइ वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको बताइरहँदा ओलीले यसबारे पार्टीले निर्णय गर्ने बताउँदै सत्ता नछाड्ने संकेत गरेका हुन् ।
ओलीले कुनै पनि छिमेकी मुलुकविरुद्ध नेपालको भूमि प्रयोग गर्न नदिने उद्घोष पनि गरे । भारत र चीन छिमेकीमात्र नभएर बजार समेत भएको उनले बताए । आर्थिक समृद्धि बिना प्रजातन्त्र दिगो नबन्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वमै उदाहरणीय भएको जनाए ।
४ सय बढी सहभागी उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले नेपालको शान्तिप्रक्रिया, लोकतन्त्र, विकास र समृद्धिका लागि सरकारको दीर्घकालीन योजना र प्राथमिकताबारे पनि आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
विदेशी भन्दा उल्लेख्य नेपाली समुदाय सहभागी उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पत्नि राधिका शाक्य, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई, परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी, राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी लगायत सरकारी अधिकारीहरु सहभागी थिए ।
विश्व नेताहरु बोलाएर बहस गराउने अक्सफोर्ड यूनियनको एउटा पुरानो परम्परा नै छ । यूनियनको फोरममा अमेरिकी राष्ट्रपतिहरु रोनाल्ड रेगन, जिमी कार्टर, रिचर्ड निक्सन, बिल क्लिन्टन, ब्रिटिस प्रधानमन्त्रीहरु विन्सटन चर्चिल, मार्गरेट थ्याचर, डेभिड क्यामरुन, टेरेजा मे, पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान साथै दलाई लामा, मदर टेरेसा, डिएगो म्याराडोना, माइकल ज्याक्सन जस्ता हस्ती उपस्थित भइसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको आज मंगलबार बेलायती समकक्षी टेरेजा मे र बेलायती राजकुमार हयारीबीच भेटघाट तय भएको छ । बुधबार फ्रान्स जानुअघि ओलीका भेटघाट र अन्तरक्रिया छन् । नेपालका प्रधानमन्त्रीको १७ वर्षपछि बेलायत भ्रमण भएको हो ।
प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७६ ०८:५७
ट्रकले बसलाई ठक्कर दिँदा दुई भारतीय तीर्थयात्रीको मृत्यु
जेष्ठ २८, २०७६ शिव पुरी
रौतहट — रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका–१ मंगलपुर स्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गमा मंगलबार बिहान भारतीय तीर्थयात्री बोकेको बसलाई ट्रकले ठक्कर दिँदा दुईजनाको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा २१ यात्रु घाइते छन् ।
रौतहटको चन्द्रपुर अस्पतालमा उपचार गराइरहेको घाइते भारतीय तीर्थयात्रु । तस्बिर : शिव पुरी/कान्तिपुर
काठमाडौंबाट जनकपुरतर्फ आउँदै गरेको ना ६ ख ९०३० नम्बरको बस मंगलपुर नजिक रोकेर राखेको अवस्थामा सोही दिशाबाट आएको को १ ख २६२५ नम्बरको ट्रकले पछाडिबाट ठक्कर दिएको हो । ठक्करबाट भारतको उपरासाही नेयर खण्डाला मन्दिर जगामारा भुवनेश्वर खोडदाहा उडिसाका छद्ध वर्षीय चरण विश्वाल र ५३ वर्षीय विजयकुमार जेनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको इलाका प्रहरी चन्द्रनिगाहपुरले जनाएको छ ।
राजमार्गमा राति १ बजे तीर्थयात्रीलाई शौच गराउन रोकेको बसलाई ट्रकले पछाडिबाट ठक्कर दिँदा दुर्घटना भएको हो । यात्रुहरु जनकपुर मन्दिर दर्शनका लागि हिडेका थिए ।
दुर्घटनामा भारतका तीर्थयात्री सज्यकान्ति प्रधान, मञ्जु विष्डा, सुन्दरि वस्तिया, शौरी विहारा लगायतका घाइते छन् । विहाराको हात भाँचिएको छ । शरीरका बिभिन्न भागमा चोट लागेका सर्वेश्वर जेना र शेषादेव जेनालाई थप उपचारको लागि वीरगञ्ज रिफर गरिएको छ । अन्य घाइतेको चन्द्रपुर र एपोलो अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
दुर्घटनामा बसचालक झापा मेची नगरपालिका–१० का दुर्गाप्रसाद पौडेलको छातीमा चोट लागेको छ । उनको अवस्था समान्य छ । दुर्घटना लगत्तै फरार ट्रकचालक सुनसरी दुहवी–८ का रमेशकुमार चौधरीलाई नियन्त्रणमा लिएको इलाका डिएसपी कवित कटुवालले बताए ।
प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७६ ०८:४७